काठमाडौं । नायिका रेखा थापा र फिल्म निर्माता छवि ओझाले डिभोर्स गरेको हल्ला एक्कासी चलेपनि यो झूटो भएको दुवैले बताएका छन् । छविले फिल्म नेपालसँग कुरा गर्दै रेखासँग आफ्नो लामो समयपछि ९ जेठमा भेट मात्रै भएको बताए । 'खै डिभोर्सबारे त मलाई थाहा छैन,' उनले भने ।
हामिले सम्पर्क गर्दा रेखा र छवि दुवै सँगै थिए । 'हामी त एकै ठाउँ पो छौं कसरी डिभोर्स हुन्छ ?' रेखाले उल्टै प्रश्न गरिन् । आफूहरुको सम्बन्ध झनै सुधि्रएको रेखाले दाबी समेत गरिन् । रेखा र छविको सम्बन्ध चिसिएपछि लामो समयदेखि दुवैजना छुट्टाछुट्टै बस्दै आएका थिए । जोरपाटीमा बस्दै आएकी रेखा एक हप्ताअघि मात्रै चाबहिलको अपार्टमेन्टमा सरेकी थिइन् ।
रेखा र छविको सम्बन्धका बारेमा पटकपटक यस्ता हल्ला चल्दै आएका छन् । कतिपयले चर्चामा आउन र फिल्म चलाउनकै लागि उनीहरुले बेलाबेला यस्तो हल्ला फिंजाउने गरेको बताउँछन् । रेखा फिल्मस्को पछिल्लो सिनेमा 'रावण' रिलिज भएकै दिन पनि रेखाले सम्बन्धविच्छेद गरेर विदेशमा बस्दै आएको नेपालीसँग विवाह गर्ने तयारी गरेको हल्ला फैलिएको थियो । रेखा र छविको उमेर ३० वर्षको फरक छ । छविको यसअघि नै दुइटी श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भईसकेको छ ।
नायक भुवन केसीले समेत केही समयअघि आफ्नो फिल्म चलाउनका लागि श्रीमतिसँगको सम्बन्धबारे यस्टै 'स्टन्ट' चलाउने गर्थे । अहिले भने नायिका रेखाले त्यही सिको गरेको टिप्पणी सिने क्षेत्रमा गरिन्छ । तर रेखाले भने आफूले त्यस्तो हल्ला कहिल्यै नचलाएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, 'खै हल्ला कसले किन चलायो थाहा छैन । फिल्म चलाउन यस्तो हल्ला सायद कसैले पनि चलाउँदैन होला ।' तर तपाइँहरुको सम्बन्धबारे यस्तो हल्ला बारम्बार किन चल्छ ? भन्ने प्रश्नमा रेखा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उम्किन् ।
रेखा र छविबीच १२ वर्षअघि विवाह भएको हो । छविले नै रेखालाई २०५७ सालमा 'हिरो' सिनेमाबाट रजतपटमा डेब्यु गराएका हुन् । त्यसपछि रेखाले निरन्तर छविसँग काम गर्दै आएकी छिन् । विवाहपछि छविले श्रीमति रेखाकै नाममा रेखा फिल्मस प्रालि दर्ता गराएर फिल्म बनाउन थालेका हुन् । यो व्यानरबाट रेखाले आधा दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।
रेखा पतिसँगको सम्बन्धले मात्रै होइन अन्य कारणले समेत प्रायः चर्चामै रहन्छिन् । कुनै समय छोटो कपडा लगाएर र बोल्ड कुरा गरेर चर्चामा आउने उनको बानी थियो । उनलाई कसरी चर्चामा आइरहन सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । त्यही भएर उनी कहिले प्रचण्डसँग नाचेर त कहिले एमालेको राजनीतिक कार्यक्रममा पुगेर चर्चा कमाउँछिन् । पछिल्लो समयको डिभोर्स हल्ला समेत रेखासँग भएको यही ज्ञानको कडी हुन सक्छ ।
rekha ra chhabi ko chal nai yastai hola
Hari Prasad Aryal भन्नुहुन्छ:
Rekha ra Chabai Ko Chal ho Ki Midiyanai Yati Dherai Sasto ho Bhuj Nai Sakiyana